2.00 $ - 637.00 $
30.45 $ 53.42 $ -43%
50.92 $ 66.13 $ -23%
21.13 $ 32.50 $ -35%
63.91 $ 77.00 $ -17%
111.00 $ 148.00 $ -25%
17.40 $ 29.00 $ -40%
14.52 $ 23.04 $ -37%
10.07 $ 19.00 $ -47%
61.88 $ 68.00 $ -9%
9.00 $ 15.00 $ -40%
4.00 $ 8.00 $ -50%
198.89 $ 220.50 $ -9.8%
21.90 $ 30.00 $ -27%
9.75 $ 15.00 $ -35%
208.98 $ 282.40 $ -26%
41.60 $ 55.46 $ -25%
33.75 $ 45.00 $ -25%
24X Green DVD Writer
23.98 $ 33.30 $ -28%
68.00 $ -9%
- မိမိကားမည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းနေရာအတိအကျပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ - Maganetic ပါဝင်တာကြောင့် အလွယ်တကူကပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
45.00 $ -20%
- အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ခေတ်အနဲ့ အညီ ကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းနဲ့ Karaoke လေးဆိုခြင်ပါသလား အရမ်းလန်းပြီး စတိုင်ကျတဲ့ အသံထွက်ကျစ်တဲ့ Studio Karaoke Microphone လေးရနေပြီနော် Speaker အနေနဲ့ပါ တွဲပါရှိတဲ့အတွက် ပုံမှန်သီးချင်းတွေကို ဖွင့်ပြီးလဲ အဆိုလေးကျင့်လို့ရပါတယ် ..အဆိုတော်နောက်က ကိုတွေပေါ့ ...Voice Lyric လေ့ကျင်လို့လဲရပါတယ် ။
GF-08 MMS Locator
45.00 $ -50%
- တည်နေရာကို အလွယ်တကူသိရှိပြီး Video လေးပါ ရိုက်ကူခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ GPS Video Locator with Security Alarm လေးက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
37.50 $ -50%
- (ပစ္စည်းအရေအတွက်နည်းလို့ မြန်မြန်မာယူထားဖို့မမေ့ပါနဲ့) တည်နေရာကို အလွယ်တကူသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GPS Tracker with Secuirty Alarm လေးက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
186.00 $ -20%
- Racing Drone လိုဘဲခေါ်ရမလား မောင်းရဒါအရမ်း မြန်ပြီး 200M - 300M ကို ပေါ့ပါးပြီးအရမ်း သုံးလို့ကောင်းတဲ့ high speed Bug3 Mini Drone နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
26.50 $ -29%
- LED မီးလုံးများနဲ့အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ 3D စတူဒီယို အရည်အသွေးမြင့် Wireless Bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
23.00 $ -50%
- အလွတ် အသုံးပြုခြင်သူအတွက်လဲ သုံးနိုင်ပါတယ် ။ - မီးလင်းအားအ နေနဲ့ အဝေးဆုံးထိရောက်အောင် ဖန်းတီးထားဒါဖြစ်လို့ စိတ်ကြိုက် နေရာမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
TK309 GPS Tracker
53.00 $ -35%
- ကား/ဆိုင်ကယ်/ရေယာဉ်များနှင့်အခြားသောစက်တပ်ယာဉ်များတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး ဖုန်း/computerများမှတစ်ဆင့်တည်နေရာကိုထောက်လှမ်းကြည့်ရှု့နိုင်သော GPS လေးဖြစ်ပါတယ်။ - ဖုန်း/computerမှတစ်ဆင့် စက်သတ်နိုင်ပြီးပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့ Control Systemပါရှိပါတယ်။၁၀စက္ကန့်တစ်ခါတည်နေရာကို live updateပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- တံခါး၊ ပြတင်းပေါက်၊ အံဆွဲတို့မှာ အတွက်းဘက် ကပ်ထားရင် ဆွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကျယ်လောင်စွာ အသံမြည်ပေးပါလိမ့်မယ်။
51.00 $ -15%
မန်မာစာ ပါပါဝင်သည့် အိမ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Smart TV ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး TV ဖြစ်ဖြစ် Computer Monitor ကြီးကြီး တွဲသုံးပြီး Update လုပ်ခြင်ပါသလားM8S Plus DVB TV Box လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
22.50 $ -50%
အလွန်သေးငယ်ပြီး ဆွဲအားကောင်းသော Lens များ Mic များထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသဖြင့် ရုပ်ငြိမ်ပြီး ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေသည့်မြင်ကွင်းများကိုပါ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးထားနိုင်ပါသည်။
297.50 $ -22%
- Day &amp; Night / indoor &amp; outdoor အကုန်ရပါတယ် ။ Wirless နဲမသုံးခြင်လို Cable နဲ့သုံးခြင်လဲသုံးလို့ရပါသေးတယ် ။
45.50 $ -50%
- ဒီ mini GPS လေးက ခရီးသွားရာတွင် သွားလိုသောနေရာနဲ့ စထွက်သည့်အကွာအဝေးနဲ့ မြန်နှုန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး တိကျစွာပြသပေးသည့် GPS လေးဖြစ်သောကြောင့် တောရိုင်းစူးစမ်းရှာဖွေ သူများအတွက် အဆင်ပြေသည့် Guider တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ - သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး သေးငယ်သောနာရီ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါသည်။
43.90 $ -16%
- မီးပျက်သောနေရာများနှင့် မီးမရှိသော နေရာများတွင် အလွန်အသုံးဝင်သော နေရောင်ခြည်ရရှိရုံဖြင့် အလင်းရောင်ကောင်းမွန်စွာရရှိသော Solar LED လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
32.50 $ -18.5%
- လက်တစ်ထွာတောင်မပြည့်တဲ့wirless keyboard mouse လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
125.50 $ -25%
- မြန်မာစာ ပါပါဝင်သည့် အိမ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Smart TV ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး TV ဖြစ်ဖြစ် Computer Monitor ကြီးကြီး တွဲသုံးပြီး Update လုပ်ခြင်ပါသလား V7 TV Box လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
60.50 $ -27%
- Wifi အသုံးပြုပြီး အပေါ်အောက် ဘယ်ညာ လှည့်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ Quality Camera လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ - ဒီကင်မရာလေးဟာ အိမ်၊ ရုံးခန်းငယ်များနှင့် ဆိုင်ခန်းငယ်များမှာ အသုံးပြုဖို့ အရမ်းကိုသင့်တော်တဲ့ကင်မရာလေးပါ။ - မိမိကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်သလို အလွယ်တကူလည်း ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ကင်မရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
36.00 $ -62%
- AV out ပဲသီးသန့်ပါတဲ့ Player တွေမှာ HDMI အဝင် TV တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် AV ကို HDMI ပြောင်းပေးတဲ့ Converter လေးပါ။
56.50 $ -13.5%
- လွယ်လင့်တကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့ Video Photo ရိုက် ဖို့ Drone ရှာနေပါသလား ? Mini FPV drone နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
22.50 $ -65%
သင်ဘယ်သွားသွားလွယ်လင့်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပီးအားသွင်းထားနိုင်မယ့် Adaptateur လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
73.00 $ -10%
ဘယ်သွားသွား အိပ်ကပ်လေးထဲထည့်ပြီး လွယ်လင့်တကူ Video / Photo ရိုက်ခြင်ပါသလား ? Hight Resolution Wirless Pen Camera က သင့်အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဘောပင်အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲလွယ်လင့်တကူ ထည့်သွားလို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘောပင် တစ်ချောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ် ။
- လက်ရှီ ဖုန်းမြင်ကွင်းကို Screen ဆိုက်ကြီးကြီး နဲ့ ကြည့်ခြင်နေသူများအတွက် ၈လက်မ ဆိုဒ် Mobile Phone Screen Amplifier နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ - အရင် Amplifer နဲ့ သေသပ်မူ့ quality ပိုင်းက အစ များစွာ ကွဲပြားတဲ့အတွက် အရမ်းကြိုက်မှာအမှန်ပါဘဲ ။
19.00 $ -40%
- Mobile LEGENDS ,Football , Endless hegemony, Eternal civilization , World3 , Dreamsanguo , Battle Dragon Blade etc... အတွက် Android ဖုန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Root ဖောက်စရာမလို ဘဲ အသုံးပြုလို့ရသလို Iphone ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ Jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုလို့ ရမဲ့ Game Control ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ MultiGame Bluetooth Controller လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
26.80 $ -8.5%
- ခရီးသိပ် မထွက်ရသော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် အဝေးကို ကြည့်တဲ့ မှန်ပြောင်းလေးတွေမြင်ရင် အလိုလိုကို လိုချင်နေမိတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူများ အတွက် ဒီပေါ့ပေါ့ပါးပါး တစ်ဖက်ကြည့် Monocular လေးက အတော်ကို သင့်တော်ပါတယ်။
23.00 $ -33.5%
- လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးခြင်ဖမ်းစက်ဖြစ်ပါသည် ။ မိုးတွင်း ခြင်ပေါးသေား ရာသီးအတွက် အမှန်တကယ် ခြင် နှိမ်နင်းပေးသား ပစည်းဖြစ်ပါတယ်။
220.50 $ -9.8%
- အိမ်သုံး/ကျောင်းသုံး/ ရုံးသုံး/ဓမ္မာရုံ ဘုန်းကြီးတရားပွဲများတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် Speaker ပဲဖြစ်ပါတယ်။
75.00 $ -15%
- (ပစ္စည်းအရေအတွက်နည်းလို့ မြန်မြန်မာယူထားဖို့မမေ့ပါနဲ့) 220inchecs အထိချဲကြည့်လို့ရတယ်နော် ။ - ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲထည့်ပြီး ဆောင်ထားလို့ ရတဲ့အရွယ် Powerbank နဲ့ တွဲသုံးလို့ရမဲ့ ခရီဆောင် Potable Projector လေးပြပါဆိုရင် Smart Potable Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- ကားထဲမွာ ထားၿပီးအေဝးကလွမ္းၾကည့္ျခင္ပါသလား ? - ေသးငယ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လုံး လိုအပ္ေနပါသလား ? - Wifi ပါၿပီး Phone ,Computer နဲ႔တြဲၾကည့္အသုံးျပဳႏိုင္မဲ့ ကင္မရာအေသးေလးျပပါဆိုရင္ HD Wifi Camera (Night Vision) ေလးကိုျပေပးပါရေစ။
75.00 $ -25%
- Phone / Remote မထိန်းဘဲ လေထဲမှာ အလိုလျောက်ရပ်တန့်နိုင် သည့် ။ Video , Photo ရိုက်ကူးမူပိုလွယ်ပါတယ်။ - ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ Camera ပါ ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရတဲ့ world smallet competition R/C drone နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
44.00 $ -17.5%
- နာရီရောဖုန်းပါ သုံးလို့ရပီး Sim card ထည့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Touch Screen Smart Watch လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
105.00 $ -21.5%
- UPS Power Bank လေးက မီးပျက်သွားတာနဲ့အော်တို ဘထ္ထရီကိုချိန်းပေးတာကြောင့် မီးပျက်လည်း Router နဲ့ အင်တာနက် Router လိုင်းကမပိတ်သွားတော့ပါဘူး။
Pocket GPS Full HD Camera Drone (Fly Time 20-23 min)
139.90 $ -18%
- Follow Me Mode ရော GPS ပါ ပါဝင်တဲ့ ယခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ နည်းပညာ မြင့် drone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.
105.00 $ -7.2%
4K ရုပ်ထွက်ရှိတဲ့ mini cctv ကင်မရာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
VR Box with Remote Control
11.30 $ -20%
8.00 $ -20%
- ဘောပင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ဘောပင်လဲ သုံးလို့ရ အခြား Function တွေလဲပါတဲ့5in 1 အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘောပင်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
18.00 $ -20%
- နာရီကြိုးစိတ်ကြိုက်လဲလှယ်နိုင်သော Color LCD လေးနဲ့ပြုလုပ်ထားသောလေးထောင့်စကရင်နာရီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ - ရေစိုခံ အကြမ်းခံဖြစ်ပြီး touch အရည်အသွေးမြင့်မားသော မှန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားလို့ တိုက်မိခိုက်မိ ပွန်းပဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
10.30 $ -12.5%
- မိမိနေအိမ် ခြံဝန်းများတွင် မှောင်ရိပ်ခိုသူကပ်ပါက sensor စနစ်ဖြင့် မီးထလင်းစေတဲ့ solar sensor motion light လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
48.70 $ -26%
- ရုပ္ထြက္ၾကည္လင္ျပီး စက္ဘီး ဆိုင္ကယ္ေတြမွာ တပ္လို႔ရတဲ့ ေရစိုခံ Sport DV Full HD ကင္မရာေလးနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။
32.50 $ -30%
- သယ်ဆောင်ရလွယ်ပီး သးငယ်ပေါ့ပါးတဲ့ ကင်မရာလေးတစ်လုံးရှာနေပါသလား 12MP ရုပ်ထွက်နဲ့ 140 degree အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ SQ11 HD Camera လေးနဲ့ မိက်ဆက်ပေးပါရစေ ။
41.20 $ -18%
- တရားပွဲအတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? ရပ်ကွက်အတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? စာသင်ခန်းအတွက်သုံးခြင်ပါသလာ? ခဏတာ ပွဲအတွက် လိုအပ်နေပါသလား?
51.80 $ -16%
- အသင်းအဖွဲ့ လိုက်လှုပ်ရှားရသော အလုပ်များတွင် သတင်းအချက်အလက်လျှင်မြန်စွာပေးပိုအသုံးပြုနိုင်သော Walki Talki လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
185.50 $ -20%
- တကယ္ ရုပ္ရွင္ရံုျကီးထဲမွာ ျကည့္ရသလို ဇတ္ကားထဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရာက္သြားနိုင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေပးနိုင္တဲ့ 5.1 speaker ေလး ျဖစ္တဲ့ FM Bluetooth Home Theater ေလးနဲ့မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။
711.30 $ -10.5%
- တရားပွဲအတွက်သုံးမလား ၊ - Office အတွက်သုံးမလား - ရုပ်ရှင်ရုံ ကြီးဆိုက် အလုပ်အတွက် သယ်ရလွယ်ကူပြီး Built-in battery ပါ size လက်ဖဝါး အရွယ်ဒါရှိပြီး 300 (big size) မြင်နိုင်တဲ့ Quality ကောင်းကောင်း Projector တစ်ခုကို ရှာနေပါသလားWirless Android Projector လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
Mini GPS Tracker(For Kids,pet,car)
66.40 $ -12%
- နာရီလိုလဲမပတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သားသားမီးမီးတို့အတွက်...မိမိရင်သွေးလေးတွေကိုဘယ်နေရာများရောက်နေမလဲစိတ်မချဖြစ်နေတဲ့ဖေဖေမေမေတို့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေစေမယ့် GPS အသေးစားလေးဖြစ်ပါတယ်....
Spring coil Stick
- လံုျခံဳေရးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဲမ်ားအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိလံုျခံဳေရးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ႐ိုက္တုတ္ေလးနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ..
I Tag Anti lost
18.90 $ -40%
- အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းများကို သော့ချိတ်အနေနဲ့တွဲချိတ်ပေးပြီး ပျောက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အထားမှားရင်ဖြစ်ဖြစ် bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီး ရှာရလွယ်ကူစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
19.00 $ -28%
- Computer ; Laptop ; mobile phone ,tablet တို့နှင့်တွဲဘက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Black Rose Gold Light Blue
45.20 $ -20%
- အစည်းအဝေးခန်းမတွင်း၌ အရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဆွေးနွေးသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း မိမိ၏နောက်ကွယ်တွင် ပြောဆိုနေကြသည့်အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်နားထောင်လိုသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊သတင်းထောက်များ သတင်းအချက်အလက်များကို အသံဖိုင်များဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရာ၌လည်းကောင်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် အိပ်ဆောင် Recorder လေးများကို မလွဲမသွေလိုအပ်မှာပါ...
Portable Handy Money Cash Counter
57.00 $ -22%
- ဘယ်လောက်ဘဲ ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ ပိုက်ဆံ ကိစ္စလွဲမှားခဲ့ရင် အထင်မှားမူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် - ဒီအတွက် ငွေပေးတဲ့အချိန် ယုံကြည်ပါတယ်လို့ စကားပြောနေမဲ့အစား စက်လေးထဲထည့်ပြီး ဟန်မပျက် ရေတွက် ဖို့အတွက် ဒီ Portable Handy Money Cash Counter လေးကို ဆောင်ထာဖို့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
26.40 $ -36%
- ဘယ်သွားသွား အိပ်ကပ်လေးထဲထည့်ပြီး လွယ်လင့်တကူ Video / Photo ရိုက်ခြင်ပါသလား ? Hight Resolution Wirless Pen Camera က သင့်အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဘောပင်အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲလွယ်လင့်တကူ ထည့်သွားလို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘောပင် တစ်ချောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ် ။
Ultra thin Selfie Drone
75.00 $ -30%
- အရမ်းပါးလွှာပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့ အရမ်းလွယ်ကူသွားတဲ့ နောက်ထွက် Ultra Thin Selfie Drone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူ အောင် Remote control လေးပါဝင်ပြီး အိပ်ကပ် ထဲ ဖြစ်ဖြစ် , ပိုက်ဆံအိပ်ထဲ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ယူသွားလို့ရမဲ့ ဆိုက် HD ရုပ်ထွက် ကင်မရာ အကောင်းစား Selfie drone လေးပါ ။
3Camera Car BlackBox
- လံုျခံု စိတ္ခ်ဖို့ ကားတစ္စီးအတြက္ Camera3လံုးပါ Blackbox တစ္ခုကိုရွာေနပါသလား 3Camera Car blackbox နဲ့မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။
30.00 $ -27%
- mobile phone ရှိသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့...အဝေး ရိုက်..ဖုန်းcamera lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
45.00 $ -25%
- Mobile Phone ရွိသူတိုင္းခရီးသြားရာသီမွာမရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ အေ၀းရိုက္ဖုန္း camera lens ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ - မိမိတို႔ရဲ့ Mobile Phoneေတြကို Cameraတစ္လံုးလို သံုးစြဲရာမွာ အေဝးျမင္ကြင္းေတြကို ဆြဲယူရိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ တြဲဖက္အသံုးျပဳဖို႔ Telescope(အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း)တစ္ခုလိုအပ္လာပါၿပီ…
26.50 $ -9%
- လူႀကီးမင္းတို႔ ခဏခဏ ေမးေနတဲ့ SmartWatch နာရီ ေလး အခု ေရာက္ရွိလာပါၿပီေနာ္။ - SmartWatch နာရီေလးဟာလဲ မိမိတို့ရဲ့ လူေနမႈဘ၀မွာ အေထာက္အကူအရမ္းျပဳတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ေနရာယူလာၾကပါျပီေနာ္။
53.42 $ -43%
- ကလေးရောလူကြီးပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Waterproof Kids GPS Camera watch လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ. ပြည့်စုံတဲ့ Function ပါဝင်တဲ့ Application တစ်ခုပေးထားဒါကြောင့် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Waterproof လည်းဖြစ်တာကြောင့် သြင်္ကန်မှာ ရေစိုလည်းလန်းနေနိုင်မှာပါ
32.50 $ -35%
- app install လုပ်စရာမလိုဘဲ ခလုပ်တချက်နှိပ်ရုံဖြစ်ဖြင့် Android နဲ့ IOS device များကို ချက်ခြင်း ချိန်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
77.00 $ -17%
148.00 $ -25%
- အသစ်ထွက်ရှိလာပီး ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ Full HD ရုပ်ထွက်ဖြစ်တာကြောင့် ပေါ့ပါးပီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
29.00 $ -40%
ဘယ်သွားသွား ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနားယောက်နေသလို မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးကို Support ပေးမယ့် ကျန်းမာရေးလက်ပတ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Black Blue Green Pink violent
515.31 $ -15%
- စာသင်ခန်း/ရုံးတွင်း/တရားပွဲ/အိမ်တွင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် စသည်ဖြင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မယ့် လက်မ ၃၃၀ ထိချဲ့ကြည့်နိုင်မယ့် 2020 နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 4K Wifi LED Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
New Model GPS 4K drone (flying time 27 minutes )
271.82 $ -17%
- ဈေးလည်းအရမ်းမကြီး ကင်မရာ အထက်အောက် လှည့်လို့ရမဲ့ ကိုယ်ရှေ့က သွားရင် နောက်ကလိုက်နေမဲ့ Drone အမျိုးအစာကိုရှာနေပါသလား. - .. Bug series က တစ်ခုဖြစ်တဲ့ New Model GPS 4K drone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
A5X Max 4K Android TV BoChannel 1000 +)
112.50 $ -20%
- မြန်မာစာ ပါပါဝင်သည့် အိမ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Smart TV ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး TV ဖြစ်ဖြစ် Computer Monitor ကြီးကြီး တွဲသုံးပြီး Update လုပ်ခြင်ပါသလား ? Android Game ကို TV မှာ ကြည့်ပြီး ကစားခြင်ပါသလား? Online Game ကစားဖို့ မြင်ကွင်းကြီးဒါ အသုံပြုဖို့အရမ်းအဆင်ပြေလှပါတယ် ။
19.25 $ -26%
66.00 $ -21%
- ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲထည့်ပြီး ဆောင်ထားလို့ ရတဲ့အရွယ် Powerbank နဲ့ တွဲသုံးလို့ရမဲ့ ခရီဆောင် Potable Projector လေးပြပါဆိုရင် Potable Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
409.00 $ -13%
ပညာခတေ်မှာ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ ရုံးတေွ၊ အစည်းအဝေးခန်းတွေ ခတေ်မှီ စာသင်ခန်းတေ ွှ၊ ဖြော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွှေ အတ ွက်Resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ အသံကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Projector ကောင်း ရှိထားသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီ့အတွက်ဒီ Projector လေးက အတွဲအဆက် partner ကောင်းလေးဖြစ်နေမှာပါ။
- ရုပ်ထွက် 4K ဖြစ်ပီး လက်မ ၃၀၀ အထိ ရတဲ့ projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။Lumens အနေနဲ့ကတော့ ၄၂၀၀ ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ရုံးမှာပဲသုံးသုံး/တရားပွဲတွေမှာပဲသုံးသုံး/ အိမ်မှာပဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်/Indoor Outdoor မိမိစိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
7 in 1 Keyboard and Mouse (Air Mouse)
26.20 $ -20%
မြန်မာစာပါရိုက်လို့ရပီး Phone/Tablet/Computer/TV/TV Box များအတွက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့7in 1 Air Mouse လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
33.50 $ -37%
- အသံထွက်အားကောင်းပီး Touch Sensor ပါဝင်တဲ့ Bluetooth Earphone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
26.60 $ -42%
- မိမိချစ်ခင်သူများကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုတိုင်သုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်World first ultr-thin card phone လေးဟာ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး credit card size လောက်ပဲရှိ ပါတယ်။ ကြုက်တဲ့ sim card ထည့်သွင်းးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် - ။မြန်မာစာလဲပါပါတယ်။
မီးလင်းအားကောင်းပြီး Zoom In/Zoom Out အသုံးပြုနိုင်တဲ့ LED Head Lamp လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အလင်းအား၊ အလင်းကျယ်ပြန့်မှုတို့ကို ချုံ့ချဲ့နိုင်ပြီး zoom ကို တစ်ဆမှ အဆ နှစ်ထောင် အထိ လိုသလို ချိန်ပီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
10.38 $ -48%
8.00 $ -50%
F11 pro battery
59.92 $ -13%
SJRC LED Lithium battery
36.75 $ -21%
Bug 5w battery
36.95 $ -24%
17.21 $ -34%
Bugs 2w battery
26.50 $ -30%
GPS Video & Audio Recorder
45.38 $ -17%
L21 4K HD Camera
113.33 $ -25%
Bugs 4w Battery charger
34.00 $ -22%
- Bugs 4w Battery ရဲ့ charging လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်
52.77 $ -29%
Selfie Drone Black Edition
52.52 $ -17%
- ကိုယ်တစ်ရောက်ထဲ ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲဆောင်သွားလို့ရမဲ့ iphone6အရွယ်ဆိုက် ....အထူကတော့ နှစ်လုံးစာ ပေါ့..အသုံးပြုခြင်တယ်ဆိုရင် Selfie Drone ကို ဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
5 Core Wirless Microphone
24.50 $ -28%
- ကာရာအိုကေလဲမသွားချင်ဘူး အိမ်မှာပဲ ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် Wirless ရော ကြိုးနဲ့ပါ နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုနိုင်မယ် Karaoke Microphone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
52.01 $ -30%
- Computer တစ်လုံးရှီ ယုံဖြင့် TV Channel Line 20 ကို လွယ်လင့်တကူ ဖမ်းကြည့်နိုင်မဲ့ USB TV Stick လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
38.00 $ -50%
Lazy Snake Style Phone Stand
- အလေးချိန်အနည်းငယ်ရှိလို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ လက်ညောင်းနေရလား?
- ယခုလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ မီးပြတ်ပြတ် မီးလာလာ အသုံးပြုနိုင်မယ့်အိမ်တိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ အားသွင်းပန်ကာ လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...